Khudbadii Raisel Wasaaraha Sweden uu ka jeediyay Talafashinka oo uu kaga hadlay arimo badan
HomeWararka Maanta SomaliskaKhudbadii Raisel Wasaaraha Sweden uu ka jeediyay Talafashinka oo uu kaga hadlay arimo badan
November 23, 2020 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
sida horay loo shaaciyay Raisal wasaaraha Sweden Stefan Löfven ayaa khudbad dheer waxa uu ka jeediyay muuqaal baahiya dowlada ee SVT isagoo kaga hadlay xaalada Wadanka uu ku jiro xiligan iyo sida looga baahan yahay in Shacabka arintan kaga hortagaan.
” Waxa maanta aan qalado gadaal ayaa la kulmidoonaa wixii aan saxno waan ku farxidoonaa hadhow ” waa hadal kheyb ka ahaa khudbada Raisal wasaaraha oo aad uga hadlay xaalada halista ah ee wadanka ku jiro.
Waxa uu sheegay in caadi u soo laabashada wadanka ay qaadaneyso mudo dheer isla markana ay jirto halis ka imaan karta xanuunka corona.
dhamaan sharciyada cusub ee dowlada ayuu sheegay in ay saameyn ku yeelandoonaan fasaxyada wadanka ka jiray iyo xaalada guud ee wadanka.
Dadweynaha Sweden ayuu ka codsaday in ay raacaan tilmaamaya hay’ada Caafimaadka dadweynaha sida in aysan kulmin ama qofka uu la kulmo qofka kaliya oo markaasi ka dhaxeeyo xiriir dhow.
ugu danbeyn ayuu ku celiyay in qofka uu sameeyo waxa ugu yar ee cudurka looga hortagi karo oo ah in uu qofka iska dhaqo gacmaha uuna xirto marada afka.